Wafti Hargaysa ka Yimid oo Maanta ka Tagay Jijiga – Rasaasa News
Wafti Hargaysa ka Yimid oo Maanta ka Tagay Jijiga
Jul 28, 2011 Wafti Hargaysa ka Yimid oo Maanta ka Tagay Jijiga
Jijiga, July 27, 2011 [ras] – Masuuliyiin ka socda maamul gabaleedka Somaliland oo uu hogaaminayo wasiirka arimaha gudaha Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa tan iyo talaadadii ku sugnaa magaalo madaxda degaanka Somalida Ethiopia ee Jijiga.
Ujeedada socdaalka waftiga ayaa la xidhiidha nabad galiyo xumo ku soo koradhay xuduuda u dhaxaysa maamulka Somaland iyo degaanka Somalida Ethiopia. Iyo arimo kale oo la xidhiidha socdaalka sharci darada ah ee ka jira xuduuda u dhaxaysa labada degaan.
Wadahadal laba maalmood socday ayaa ku dhex maray labada maamul magaalada Jijiga. Wadahadalka waxaa ka qayb qaatay dhinaca maamulka Somaliland wasiirka arimaha dibada Maxamed Cabdi Gaboose, taliyaha ciidamada Nuur Ismaaciil, taliyaha ciidanka Booliska.
Dhinaca dawlada degaanka Somalida, waxaa wadahadalka uga qayb galay Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, hogaanka nabad galiyada Cabdulahi Yuusuf Weerar, taliyaha Booliska gaashaanle sare Yuusuf Maxamuud Muuse, madaxa xafiiska madaxtooyada Cabdifataax Maxamuud Xuseen iyo gudoomiyeyaasha gabalka Jijiga iyo Dhagaxbuur oo ah labada gabal ee ay xuduuda wadaagaan maamulka Somaliland.
Dhawaan ayey ahayd kolkii uu magaalada Dire Dawa, uu kula kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo saraakiisha ugu saraysay amniga Ethiopia.
Maamulka Somaliland ayaa baryahan dambe hoy u noqday ururada nabad diidka ah ee ka dagaalama degaanka Somalida Ethiopia, dhawr goorna ka soo galiyey ciidamo ka tirsan nabad diidka xeebahooda.
Waxaa kale oo maamulka Somaliland ay fargalin ku hayaan degaano ka tirsan degaanka Somalida Ethiopia iyaga oo aan ixtiraamin xuduuda, iyaga oo soo galiya badeecooyin sharci daro ah, isla markaasna degaanka ka qaata badeecooyin iyana sharci daro ah.
Sida ay wararku sheegayaan, waxaa la isku af gartay in la ilaaliyo xuduuda si wadajirana looga wada shaqeeyo. Waxaana la isku af gartay in la sameeyo gudi isku dhaf ah oo saddexdii biloodba mar ku kulma magaalada Jijiga.
Waxaa kale oo la siidayn doonaa gaadiid badan oo ku xayiran dhinaca degaanka Somalida Ethiopia, ka dib kolkii ay si sharci daro ah ku soo galeen degaanka Somalida Ethiopia.
Isku soo duuboo waxaa la isla gartay in la ilaaliyo nabad galiyada muwaadiniinta u dhashay labada maamul ee ka ganacsada labada dhinac.